Ayatollah Ali Khamenei: Imaaraadka waxaa raacday ceeb aan abid ka hari doonin - Caasimada Online
Home Dunida Ayatollah Ali Khamenei: Imaaraadka waxaa raacday ceeb aan abid ka hari doonin
Ayatollah Ali Khamenei: Imaaraadka waxaa raacday ceeb aan abid ka hari doonin
Tehran (Caasimada Online) – Hoggaamiyaha sare ee Iran ayaa ku eedeeyey Imaaraadka Carabta inay khiyaameeyeen dunida muslimka, markii ay go’aansadeen inay xiriir la yeeshaa Israel.
Ayatollah Ali Khamenei ayaa khudbad laga sii daayey taleefishinka Talaadaadii waxa uu ku sheegay in Imaaraadka ay dhabarka ka mindiyeeyeen Islaamka, ayna weligood ceeb ku noolaan doonaan.
“Dabcan, khiyaanada Imaaradka masii jiri doonto, hase yeeshee ceebta ka raacday weligeed waa la xusuusan doonaa,” ayuu yiri Ayatollah Ali Khamenei.
“Waxay maamulka Saxnuuniyadda u ogolaadeen inuu gobolka soo galo, waxayna hilmaameen Falastiiniyiinta. Imaraadka weligood waa ay ceebeysnaan doonaan. Waxaan rajeynaa inay soo baraarugaan oo ay magdhow ka bixiyaan wixii ay gaysteen,” ayuu yiri
Mas’uuliyiinta Iran ayaa si xooggan u cambaareeyey heshiiska Mareykanka uu fududeeyey ee Israel iyo Imaaraadka, waxayna ka digeen in xiriirkooda uu dagaal ka hurin karo gobolka.
Dhinaca kale, sarkaal u hadlay wasaaradda arrimaha dibedda Imaaraadka Jamal al-Musharakh ayaa ku gacan seeray hadallada Khamenei, wuxuuna sheegay in “waddada nabadda iyo barwaaqada aan lagu gaarin hadallada naceybka iyo hurinta ku dhisan,”
“Hadallada noocan ah waxay lid ku yihiin nabadda gobolka,” ayuu yiri Musharakh.